N'ogbe siri ike ntọala anion mgbanwe onye nrụpụta na ndị na -ebubata ya. Dongli
Resins Nhazi matriks nke Polymer Ọdịdị Ụdị Ahụ ỌrụOtu
Mkpokọta ikike mgbanwe meq/ml Ọdịnaya Mmiri Akụkụ urughuru mm ỌzịzaClOH Max. Mbupu ibu g/l
GA102 Gel Ụdị nke M, Poly-Styrene nwere DVB O doro anya na obere beads okirikiri edo edo R-NCH3
GA104 Gel Ụdị nke M, Poly-Styrene nwere DVB O doro anya na obere beads okirikiri edo edo R-NCH3
GA105 Gel Ụdị nke M, Poly-Styrene nwere DVB O doro anya na obere beads okirikiri edo edo R-NCH3
GA107 Gel Ụdị nke M, Poly-Styrene nwere DVB O doro anya na obere beads okirikiri edo edo R-NCH3
GA202 Gel Type II, Poly-Styrene nwere DVB O doro anya na obere beads okirikiri edo edo RN (CH3)2(C2H4OH)
GA213 Gel, Poly-Acrylic nwere DVB Kpochapụ Mpekere Ọdịdị R-NCH3
MA201 Ụdị macroporous nke m polystyrene nwere DVB Opaque chaplet Ammonium nke anọ
MA202 Macroporous Type II Polystyrene nwere DVB Opaque chaplet Ammonium nke anọ
MA213 Poly-Acrylic macroporous nwere DVB Opaque chaplet R-NCH3
Nlezianya A Na -eji
1. Debe mmiri ụfọdụ
Resin mgbanwe ion nwere mmiri ụfọdụ ekwesighi ịchekwa ya na mbara ikuku. N'oge nchekwa na njem, ekwesịrị idebe ya mmiri ka ọ ghara ihicha nkụ na akpịrị ịkpọ nkụ, na -ebute resin gbajiri agbaji. Ọ bụrụ na resin na -agwụ mmiri n'oge nchekwa, ekwesịrị itinye ya na mmiri nnu (25%), wee jiri nwayọ gwakọta ya. Ekwesighi itinye ya ozugbo na mmiri, ka ọ ghara ịgbasa ngwa ngwa na resin gbajiri agbaji.
2. Debe otu ọnọdụ okpomọkụ
N'oge nchekwa na njem n'oge oyi, ekwesịrị idobe ọnọdụ okpomọkụ na 5-40 ℃ iji zere ịfụ oke ma ọ bụ ikpo oke ọkụ, nke ga-emetụta ogo ya. Ọ bụrụ na enweghị ngwa mkpuchi ọkụ n'oge oyi, enwere ike ịchekwa resin na mmiri nnu, a ga -ekpebi mkpokọta mmiri nnu dị ka ọnọdụ okpomọkụ si dị.
3. Mwepụ adịghị ọcha
4. Ọgwụ nkwalite oge niile
N'iji ya eme ihe, enwere ike igbochi iji nwayọ jiri ọla (dị ka ígwè, ọla kọpa, wdg) gwakọta resin ahụ na ụmụ irighiri ihe ndị dị ndụ. Ọ dị mfe mmetọ anion site na ihe ndị dị ndụ. Enwere ike ịgba ya mmiri ma ọ bụ jiri 10% NaCH + 2-5% NaOH gwakọtara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike itinye ya na 1% hydrogen peroxide solution maka nkeji ole na ole. A nwekwara ike iji ụzọ ndị ọzọ, dị ka ọgwụgwọ ọzọ alkali acid, ọgwụgwọ ịcha ọcha, ọgwụgwọ mmanya na ụzọ ịgba ọgwụ mgbochi dị iche iche.
Nke gara aga: Resin macroporous chelation
Osote: Resin mgbanwe cation acid adịghị ike